“လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပဲ ဖြစ်စေ၊ အစိုးရပဲဖြစ်စေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် လေးစားမှုလေးတော့ ထားသင့်တယ်”
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာ နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
“ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ဆန္ဒရှိမှ ထိုးပေးမှာပါ၊ ဆန္ဒမရှိရင် ဇွတ်မလုပ်ပါဘူး”
မွန်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ မိုးဆွေနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မွန်ပြည်နယ်တွင် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ကျောင်းအခြေပြု ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးမှုအဖြစ် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာတွင် ပထမအကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကလေးငယ် သုံးဦး အော့အန်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကာကွယ်ဆေး...
Interviews October 25, 2016
လက်ရှိမြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက၏ အရည်အသွေးနိမ့်ကျလာသည့် အခြေအနေကို လူမှုကွန်ရက် Facebook တွင် သရော်သည့် မြန်မာပေါကား များရပ် Event လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တချို့က အကဲဆတ်ခဲ့ကြသည် ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဒါရိုက်တာရီဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည် များထဲမှကောက်နုတ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ဟင်္သာမီဒီယာ ။ ...
Interviews September 16, 2019
Interviews September 3, 2016
“တိုင်းရင်းသားအားလုံး ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ရပ်တည်ရမယ်ဆိုရင်တော့ သဘောထားကွာခြား နေမယ်လို့မထင်ဘူး” ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားများအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် အသံတစ်ခုတည်း ထွက်ပေါ်ရေးအတွက် ကျင်းပသည့် မွန်အမျိုးသားကွန်ဖရင့်တွင် မွန်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် မွန်အင်အားစုများက ဆွေးနွေးခဲ့သောအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဟင်္သာမီဒီယာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဟင်္သာမီဒီယာ...
“ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ ချွန်ပြီးတော့ သွားမှာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်သွားမှာပါ”
မွန်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နေရာကို အနိုင်ရရှိခဲ့သော မွန်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်သိန်းအနေဖြင့်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တရားသူကြီးများ တွေ့ဆုံစဉ် မည်သည့်ကိစ္စများညွှန်ကြားထားပါသနည်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေများကို မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဦးစီးမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိမ်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဦးစီးမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်စိမ်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဟင်္သာမီဒီယာ ။ ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုုပ်၊ ပြည်ထာင်စု တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်တွေကို...
“တည်ဆောက်မှုဟာ အရည်အသွေး မပြည့်မီဘူးလို့ တင်ပြလာရင်တော့ ကုမ္ပဏီကို ချက်ချင်း လျော်ခိုင်းမှာ ဖြစ်တယ်”
မွန်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးမင်းကျော်လွင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မွန်ပြည်နယ်တွင် လစ်လပ်နေသည့် စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးနေရာအတွက် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခံရသော ဦးမင်းကျော်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော စည်ပင်ကဏ္ဍကို မည်သို့ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များအပါအဝင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ...
Interviews October 13, 2016
ယခုအပတ်အနုပညာကဏ္ဍတွင် ကိုယ်ပိုင် တေးစီးရီးခွေ ပထမဆုံး ထုတ်ဝေတော့မည့် မွန်အမျိုးသမီးတေးသံရှင် အိုင်စွမ် (အာဲသြန်) ၏ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် ဟင်္သာမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဟင်္သာမီဒီယာ ။ ။ မင်္ဂလာပါ ၊ လက်ရှိ အိုင်စွမ်(အာဲသြန်)ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေလေးတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။ အိုင်စွမ် ။ ။...
1234...1414 ၏စာမျက်နှာ 3